शालिकरामको मृत्यु प्रकरण सीसीटीभी फुटेजमा देखियो यस्तो दृश्य ! – All top Here
Home/समाचार/शालिकरामको मृत्यु प्रकरण सीसीटीभी फुटेजमा देखियो यस्तो दृश्य !
शालिकरामको मृत्यु प्रकरण सीसीटीभी फुटेजमा देखियो यस्तो दृश्य !
काठमाडौं। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले डोरी किनेको पसल भेटिएको छ । गत साउन २० गते नारायणगढ बसपार्कमा रहेको एक होलसेल पसलबाट पुडासैनीले डोरी किनेको दृश्य पसलमा रहेको सीसीटीभी फुजेटमा देखिएको हो । चितवन प्रहरीले श्रेष्ठको पसलको सीसीटीभीको हार्डडिस्क नै लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले आइतबार साँझ हार्डडिस्क लगेर थप अनुसन्धान थालेको हो
बसपार्कको होटल कंगारुमा दिउँसो ३.३० बजे आएका पुडासैनीले कोठा बुक गरेपछि बाहिर निस्किएर डोरी किनेका थिए । बसपार्क नजिकै सडकको जेब्राक्रस कटेर एक्लै आएका पुडासैनीले डोरी मागेको पसलको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ । लुगा सुकाउन भन्दै पुडासैनीले ५ मिटरको डोरी मागेको भिडियोमा देखिएको चितवन प्रहरी स्रोतले बतायो ।
होलसेलबाट खुद्रा सामान नबेच्ने भनेपछि पुडासैनी निकैबेर पसलमा रोकिएको भिडियोमा देखिन्छ । धेरैबेर बसेपछि होलसेल पसलकी आमाले डोरी दिन कामदारलाई भनेकी थिइन् ।पसलमा काम गर्ने कामदारले पाँच मिटरको डोरी नापेर दिएको दृश्य भिडियोमा छ । पुडासैनीले पैसा तिरेर प्लाटिकको झोलामा राखेर डोरी लगेको देखिन्छ ।
पढेको मान्छेले भन्दा पनि जिन्दगीसँग लडेको मान्छेले धेरै कुरा सिकेको हुन्छन र सिकाउछन पनि ।
विप्लव कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भिडन्त
विर्तामोडमा गु’प्तां’ग काटेर पुरुषको ह’त्या, श्रीमती र सासू–ससुरा प’क्रा’उ
कोरोना कहरकाबिच फेरि अर्को बज्रपात बालबच्चा बोकेको बिमान दुर्घटना